Outstanding Fees – Mandalay International Science Academy
March 17, 2021 Wai Yan
Mandalay International Science Academy အပျေါ ယုံကွညျစိတျခစြှာဖွငျ့ ကူညီ လကျတှဲခဲ့သညျ့အတှကျ ကြေးဇူး အထူးတငျရှိပါ‌ကွောငျး ဦးစှာ ပွောကွားလိုပါသညျ။ အထူးသဖွငျ့ အခကျအခဲမြိုးစုံ ကွုံတှကွေ့ရသော ယခု စာသငျနှဈတှငျ လူကွီးမငျးတို့၏ ပံ့ပိုးကူညီအားပေးမှုကွောငျ့သာ လူကွီးမငျးတို့၏ ရငျသှေးမြား ပညာရေးအဆကျမပွတျစရေနျအတှကျ ကြောငျးဘကျမှ စီစဉျဆောငျရှကျပေးနိုငျခွငျး ဖွဈပါသညျ။ လူကွီးမငျးတို့၏ကလေးမြား အိုးမကှာအိမျမကှာ ကနျြးမာရေးအတှကျ ပူပငျရနျမရှိဘဲ online မှ စာ ဆကျလကျ သငျယူနိုငျကွစရေနျ လူကွီးမငျးတို့ မိဘမြားဘကျမှ အားကွိုးမာနျတကျ ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုမြားအား အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျမိပါသညျ။
လူကွီးမငျးတို့ အစဉျတစိုကျ ကူညီပေးခဲ့ကွသညျ့အတှကျ အခကျအခဲ မြိုးစုံ ကွားမှပငျ ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသငျနှဈ တဈနှဈတာ အောငျမွငျစှာ ပွီးဆုံးတော့မညျ ဖွဈပါသညျ။ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားအတှကျ မညျသညျ့နညျးနှငျ့မြှ ပညာရေး မနှောငျ့နှေးနသေငျ့ဟု ယုံကွညျပါသညျ။ ကြောငျးအနဖွေငျ့လညျး ရရှိနိုငျသညျ့ အခှငျ့အလမျး မှနျသမြှအား အသုံးပွုကာ ပညာရေး မ‌နှောငျ့နှေးစရေနျ တတျစှမျးနိုငျသမြှ အကောငျးဆုံး စီစဉျဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ကွပါသညျ။ မညျမြှပငျ ခကျခဲပါစေ ပညာရေး အဆကျမပွတျစရေနျအတှကျ တာဝနျကပြှေနျခဲ့ကွပါသော မိဘမြား၊ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား ဆရာဆရာမမြား အားလုံးတို့အတှကျ အထူးဂုဏျယူမိပါသညျ။ Cambridge International သငျရိုးမြားသငျယူကွသညျ့ ကြောငျးသားမြား ရှိသငျ့ရှိထိုကျသော ဂုဏျအရညျအခငျြးမြားဖွဈသညျ့ ကိုယျ့အားကိုယျကိုး တာဝနျသိတတျမှု၊ မိမိကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု၊ တီထှငျဖနျတီးတတျမှု စသညျတို့အား နညျးလမျးမြိုးစုံဖွငျ့ ပြိုးထောငျပေးဖွဈသညျ့ အခှငျ့အလမျးမြား ပျေါရာ ပညာသငျနှဈဟုလညျး ဆိုနိုငျပါသညျ။
မကွာမီ စတငျတော့မညျ့‌ နှရောသီပိတျရကျရှညျတှငျ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား ပညာရေး အဆကျမပွတျနစေရေနျ ရညျရှယျလကျြ ကြောငျးအနဖွေငျ့ အခမဲ့ Online သငျခနျးစာမြား စီစဉျပေးသှားပါမညျ။ စိတျပါဝငျစားသူ မညျသူမဆို သူတို့အားသညျ့အခြိနျတှငျ အဆိုပါ Online သငျခနျးစာမြားကို လလေ့ာသငျယူနိုငျပါမညျ။ လိုအပျခကျြ ရှိသော ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားအတှကျမူကား မဖွဈမနေ တကျကွရနျ ကြောငျးဘကျမှ သီးသနျ့ ဆကျသှယျ အကွောငျးကွားပေးပါမညျ။
အခွအေနေ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ကြောငျးပရဝဏျတှငျ ပုံမှနျအတိုငျး ကြောငျးမဖှငျ့ဖွဈသညျမှလှဲ၍ သတျမှတျသငျရိုးညှနျးတမျးအတိုငျး အတတျနိုငျဆုံး ပွညျ့မီအောငျ သငျကွားပေးခဲ့နိုငျသညျ့အတှကျလညျး ကြောငျးအနဖွေငျ့ ဂုဏျယူမိပါသညျ။
ယခုကဲ့သို့ ကြောငျး ဆကျလညျရပျတညျ လညျပတျနျိုငျခဲ့ခွငျးမှာ လူကွီးမငျးတို့ ကြောငျးသားမိဘမြား၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကွောငျ့သာ ဖွဈပါသညျ။ ကြောငျးအနဖွေငျ့ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဝနျထမျးမြားအား လခပေးခွငျး၊ အခွားကုနျကစြရိတျမြား ပေးခခြွေငျးတို့ ဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျ ကြောငျးသားမြားအတှကျ ပေးသှငျးသော ကြောငျးသငျတနျးကွေးကိုသာ မှီခိုရပါသညျ။ ယခုလို အခကျအခဲကိုယျစီ ရှိကွမညျ့ကာလတှငျ ငှကွေေးကိစ်စအား တတျနိုငျသမြှ မပွောလိုသျောလညျး ကြောငျး ဆကျလကျ ရပျတညျ လညျပတျနိုငျစရေေး၊ ကြောငျးဘကျမှ ဆရာဆရာမ ဝနျထမျးလခမြားအပါအဝငျ အထှထှေေ ပေးခရြေနျရှိသေးသညျတို့အား ပေးခနြျေိုငျရေးတို့အတှကျ လူကွီးမငျးတို့၏ ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုဖွငျ့သာ ဆကျလကျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။
သို့အတှကျကွောငျ့ ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသငျနှဈအတှကျ ပေးခရြေနျ ကနျြရှိနသေေးသော ကြောငျးလခ သငျတနျးကွေးမြားအား ၂၅. ၃. ၂၀၂၁ မတိုငျမီအခြိနျအတှငျး ပေးခပြေေးကွပါရနျ လေးစားစှာ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။
လူကွီးမငျးတို့ နားလညျပေးကာ ပူးပေါငျးကူညီကွမညျ့အတှကျ အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
Mandalay International Science Academy အပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ကူညီ လက်တွဲခဲ့သည့်အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါ‌ကြောင်း ဦးစွာ ပြောကြားလိုပါသည်။ အထူးသဖြင့် အခက်အခဲမျိုးစုံ ကြုံတွေ့ကြရသော ယခု စာသင်နှစ်တွင် လူကြီးမင်းတို့၏ ပံ့ပိုးကူညီအားပေးမှုကြောင့်သာ လူကြီးမင်းတို့၏ ရင်သွေးများ ပညာရေးအဆက်မပြတ်စေရန်အတွက် ကျောင်းဘက်မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ကလေးများ အိုးမကွာအိမ်မကွာ ကျန်းမာရေးအတွက် ပူပင်ရန်မရှိဘဲ online မှ စာ ဆက်လက် သင်ယူနိုင်ကြစေရန် လူကြီးမင်းတို့ မိဘများဘက်မှ အားကြိုးမာန်တက် ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုများအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ အစဉ်တစိုက် ကူညီပေးခဲ့ကြသည့်အတွက် အခက်အခဲ မျိုးစုံ ကြားမှပင် ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်တာ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ပညာရေး မနှောင့်နှေးနေသင့်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ကျောင်းအနေဖြင့်လည်း ရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်း မှန်သမျှအား အသုံးပြုကာ ပညာရေး မ‌နှောင့်နှေးစေရန် တတ်စွမ်းနိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ မည်မျှပင် ခက်ခဲပါစေ ပညာရေး အဆက်မပြတ်စေရန်အတွက် တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ကြပါသော မိဘများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဆရာဆရာမများ အားလုံးတို့အတွက် အထူးဂုဏ်ယူမိပါသည်။ Cambridge International သင်ရိုးများသင်ယူကြသည့် ကျောင်းသားများ ရှိသင့်ရှိထိုက်သော ဂုဏ်အရည်အချင်းများဖြစ်သည့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး တာဝန်သိတတ်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု၊ တီထွင်ဖန်တီးတတ်မှု စသည်တို့အား နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ပျိုးထောင်ပေးဖြစ်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ရာ ပညာသင်နှစ်ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။
မကြာမီ စတင်တော့မည့်‌ နွေရာသီပိတ်ရက်ရှည်တွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပညာရေး အဆက်မပြတ်နေစေရန် ရည်ရွယ်လျက် ကျောင်းအနေဖြင့် အခမဲ့ Online သင်ခန်းစာများ စီစဉ်ပေးသွားပါမည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို သူတို့အားသည့်အချိန်တွင် အဆိုပါ Online သင်ခန်းစာများကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါမည်။ လိုအပ်ချက် ရှိသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်မူကား မဖြစ်မနေ တက်ကြရန် ကျောင်းဘက်မှ သီးသန့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကျောင်းပရဝဏ်တွင် ပုံမှန်အတိုင်း ကျောင်းမဖွင့်ဖြစ်သည်မှလွဲ၍ သတ်မှတ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်း အတတ်နိုင်ဆုံး ပြည့်မီအောင် သင်ကြားပေးခဲ့နိုင်သည့်အတွက်လည်း ကျောင်းအနေဖြင့် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကျောင်း ဆက်လည်ရပ်တည် လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ လူကြီးမင်းတို့ ကျောင်းသားမိဘများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းအနေဖြင့် ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်းများအား လခပေးခြင်း၊ အခြားကုန်ကျစရိတ်များ ပေးချေခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျောင်းသားများအတွက် ပေးသွင်းသော ကျောင်းသင်တန်းကြေးကိုသာ မှီခိုရပါသည်။ ယခုလို အခက်အခဲကိုယ်စီ ရှိကြမည့်ကာလတွင် ငွေကြေးကိစ္စအား တတ်နိုင်သမျှ မပြောလိုသော်လည်း ကျောင်း ဆက်လက် ရပ်တည် လည်ပတ်နိုင်စေရေး၊ ကျောင်းဘက်မှ ဆရာဆရာမ ဝန်ထမ်းလခများအပါအဝင် အထွေထွေ ပေးချေရန်ရှိသေးသည်တို့အား ပေးချေနိုင်ရေးတို့အတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုဖြင့်သာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့အတွက်ကြောင့် ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပေးချေရန် ကျန်ရှိနေသေးသော ကျောင်းလခ သင်တန်းကြေးများအား ၂၅. ၃. ၂၀၂၁ မတိုင်မီအချိန်အတွင်း ပေးချေပေးကြပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ နားလည်ပေးကာ ပူးပေါင်းကူညီကြမည့်အတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Parent Message Jan 28